Ny fanafenana ny famandrihana anao dia tsy paikady fihazonana | Martech Zone
Ny paikady fanafenana ny famandrihana dia tsy paikady fihazonana
Alahady, Aogositra 26, 2012 Alahady, Aogositra 26, 2012 Douglas Karr
Manombana serivisy betsaka izahay hahafahanay manoratra momba izany ao amin'ny bilaogy na mampiasa azy ireo ho an'ny mpanjifanay. Teknika iray izay anomboanay mahita bebe kokoa dia ny serivisy ahafahanao manangana kaonty mora foana, saingy tsy misy fomba fanafoanana izany. Heveriko fa tsy fanaraha-maso ity… ary avy hatrany dia mamily ahy any amin'ny orinasa izany.
Nandany 15 minitra teo ho eo aho androany maraina nanao an'izany. Serivisy fanaraha-maso ny media sosialy natolotra a Andrana maimaim-poana ka nisoratra anarana aho. Rehefa afaka 2 herinandro teo dia nanomboka nahazo mailaka aho izay nampitandrina ahy fa efa ho tapitra ny fitsarana ahy. Rehefa afaka 30 andro dia nanomboka nahazo mailaka isan'andro aho izay nilaza tamiko fa tapitra ny fe-potoam-piasako ary manana rohy mankany amin'izay ahafahako manavao ny kaonty voaloa.
Ireo mailaka rohy tsy hisoratra anarana nitondra ahy tany amin'ny pejy fidirana kaonty. Grrr… ny fidirana an-tsokosoko hamoahana ny fisoratana anarana dia peeve biby iray hafa amiko. Satria niditra an-tsehatra ihany aho dia nieritreritra fa hanafoana ilay kaonty. Nankany amin'ny pejin'ny safidiko kaonty aho ary ny safidy tokana dia ny safidy fanavaozana hafa - tsy misy safidy fanafoanana. Na dia amin'ny pirinty tsara aza.
Mazava ho azy, tsy nisy koa fomba fangatahana fanampiana. FAQ fotsiny. Famerenana haingana ireo FAQ ary tsy misy fampahalalana momba ny fanafoanana ny kaonty. Soa ihany fa ny fikarohana anaty ny FAQ dia nanolotra ny vahaolana. Rohy manafoana nalevina tao anaty kiheba tsy fantatra ao anatin'ny mombamomba ny mpampiasa.
Mampatsiahy ahy ny indostrian'ny gazety ity… izay ahafahanao misoratra anarana amin'ny Internet matetika, saingy mila miantso sy miandry miandry ianao hiresaka amin'ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa hanafoana ny famandrihana anao. Ary… raha tokony hofoanana izany dia manandrana manolotra safidy sy fanomezana famandrihana hafa ho anao izy ireo. Niantso an-telefaona tamin'ireo olona ireo aho izay tezitra mafy ka naverimberiko hatrany hatrany ny “fanafoanana ny kaontiko” mandra-pankatoavin'izy ireo.
Ry vahoaka, raha anao ity paikady fihazonana, manana asa hatao ianao. Ary ianao dia misaron-doha ny olana amin'ny vokatrao na serivisinao amin'ny alàlan'ny fanakonana ny fitanana ny mpanjifanao marina. Ajanony io! Ny fanafoanana ny vokatra na serivisy dia tokony ho tsotra toy ny fisoratana anarana ho an'ny iray.
Maninona ny solosaina fandraharahana manaraka no tokony ho Mac
27 Aogositra 2012 à 7:26
Manelingelina ahy izany rehefa mahita izany aho. Raha vantany vao mahazo mailaka misy rohy tsy misoratra anarana aho dia marihiko ho spam ary raha tsy manampy izany dia mamorona fitsipika hamafa azy ireo eo an-toerana.